2022.01.20 - Somalisch - "Eigen bankrekening"
Guri > Xisaabtada bankiga
Xisaab bangi aad leedahay
Si aad akoontiga baanka ee kuu gaarka ah u furato waxa lagaa rabaa namabrka adeegga bulshada (BSN) iyo aqoonsi Wdokumenti ama oggolaasho joogitaan
Nederland xisaab bangi (ama xisaabta lacagta kuugu soo dhacdo) aad leedahay waa lagama maarmaan. Haddii aad bangi ka furato xisaab lacagta kuugu soo dhacdo, waxaa lagu siinayaa kaar bangi. Sida kaarkaaga lacagta ee Moneycard ayaad dukaamada wax uga gadan kartaa lacagna ugala soo bixi kartaa aalada lacagta. Laakiin xisaab bangi aad leedahay intaa in ka badan ayaad ku samayn kartaa.
Maxaad ku samayn kartaa xisaabtaada bangiga?
Xisaabtaada bangiga waxaad ku samayn kartaa:
• Lacag khaash ah aad kala soo baxdo aalada lacagta
• Ku bixin kartaa lacag (adigoo istcimaalaya kaarka bangiga) dukaamada, maqaayadaha, isteeshinada, meelaha baaburta la dhigto iyo meelo kale oo badan.
• Digitaal aad ku bixiso (gudbinta lacagta) iyo helida lacagta
• Badeecada internetka (dukaamada internetka) aad ku bixiso. Tusaale addegsiga iDEAL.
• Shirkadaha u ogolaato(awood u siiso) in ay qadar lacag ah ka jartaan xisaabtaada. Tusaale lacagta kirada guriga ee bil walba soo noqnoqota, gaaska, biyaha, korontada iyo rukunka mobiilkaaga. Sidaa daraadeed aadan ilaabayn in shirkadaha lacagtooda waqti fiican aad iska bixiso iyo aadan la kumi doonin wax dhibaato ah.
• Internetka iyo mobiilka oo aad howlaha bangiga ka fuliso
• Bangiyada intooda badan weli waa laguu ogol yahay isticmaalka foomamka lacagta lagu diro iyo helitaanka warqadaha cadaynat xisaabta. Laakiin sida badan aad lacag dheeri ah ku bixinayso.
Codsiga xisaab bangi
Si aad u furatoa xisaab bangi waxaad u baahan tahay nambarka qofka u gaarka ah (BSN) iyo W-dokumenti ansax ah ama sharci degenaansho.
Ma leedahay sharciga degenaansha?
Markaa waxaad nambarkaaga gaarka ah BSN kaga codsan kartaa bangiga aad rabto xisaab bangi. Adiga ayaa shaqsiyan u tegi kara bangiga. Haddii aadan weli afka Nederlanka ku fiicnayn ama aadan ingriis ku hadal, markaa waa in aad qof kuu turjuma sii kaxaysataa.
Haddii aad sharci degenaansho leedahay, waxaa muhiim ah in sida ugu dhaqsiyaha badan aad ku furato xisaab bangi. Tani waad u baahantahay si aad ugu noolaato magaalaga aad degeyso. COA waxay kuugu soo rogi karaan ganaax haddii sabab macquul ah la’aanteed aadan xisaab bangi u furan.
Ma leedahay W-dokumenti?
W-dokumentigaaga iyo BSN kaaga, waxaad bangiyada qaarkood ee Nederland kaga codsan kartaa xisaab bangi asaasi ah. Bangiyadan waa: Rabobank, ING Bank, ABN AMRO, SNS Bank iyo Triodos Bank. Si aad taasi u samayso waxaad u baahan tahay foom codsi oo gaar ah. Waxaad kaasi ka codsan kartaa COA ama ka soo dejisan kartaa bogga www.basisbankrening.nl .
Meesha canshuurta kuugu leh
Laga soo builaabo 1 janaayo 2016 bangiyada waa in ay u hogaansamaan nidaamka guud ee warbixinada (CRS). Marka aad codsanaysid xiaab bagi ama xisaab bangi asaasi ah waxa uu bangiga ku weydiin doonaa meesha cansuurtaaada. Waa in aad sidaa daraadeed foom aad u buuxisaa. Dadka magangelyadoonka ah iyo sharciga haysta waa in ay Nederland u sheegtaan meesha canshuurta.
Kharashka xisaabta bangiga
Xisaab bangi waa lacag. Shaqaalaha COA ayaad warsan kartaa inta uu dhan yahay kharshkaasi. COA way kaa bixinaysaa kharashka xisaabta bangiga inta aad ku nooshahay xerooyinka COA
Xisaabta bangiga oo aad u gudbiso COA
Marka aad akontigada bankiga yeelato, waxa ay COA lacagtaada usbuuca iyo magdhawyo kaleba kugu soo direysaa akontigaas. Hadaba hore u sii COA nambarka akontigada!
Moneycard adiga joojin kara u adeegso taasi Consumer Portal (internet) (lacagta) haraaga ku ah ku shubo akontigada wax bixinta. Haddii kale si qoraal ah ayaad amar ku bixin kartaa in haraaga lagugu soo shubo akontigada wax bixinta (kharashka waa : € 7,50). Weydii shaqaalaha xaruunta dejjinta.
Moneycard aad leedahay waxa aad u adeegsankartaa in aad lacag ku bixiso ama aad kula baxdo ilaa iyo taariikhda ugu dambeysa oo isla Moneycard-ka ku taal. Lacagta haraaga ee ku jirta Moneycard waxa ay halkaa ku sii jireysaa qiyaastii 15 sano. Moneycard marka uu dhaco isaga oo haraa ku jiro, waxa aad Rabobank ka codsan kartaa in haraaga lagu siiyo. taasi waa in aad kharash ku bixisaa.
Haddii aad guurto (ka noqoto xitaa azc kale), markaa waa in aad bankiga siisaa ciwaankada cusub. Saa hadii aad yeeli weyso, bankiga warqadaha (iyo xitaa kaarka bankiga) waxa ay u dirayaan ciwaankii hore.
Dit document is afkomstig van https://www.mycoa.nl, zie https://www.mycoa.nl/so/print/infosheetprint/1581
2022.01.20 - Somalisch